Antonio Conte oo ka hadlay sababtii uu keydka u geliyey Cesc Fabregas – Gool FM
Antonio Conte oo ka hadlay sababtii uu keydka u geliyey Cesc Fabregas
Haaruun August 16, 2016
(London) 16 Agoosto 2016 – Chelsea ayaa 2-1 uga adkaatay kooxda West Ham kulankoodii furitaanka Premier League, laakiin Cesc Fabregas ayaa ku guuldarreystay inuu ka mid noqdo shaxda Conte.
Wiilka cusub ee N’Golo Kante ayaa lagu soo bilaabay, ka hor Cesc iyo Pedro, Victor Moses iyo Michy Batshuayi ayaa iyaguna helay fursado ay keydka uga soo baxaan.
29-sano jirkaan ayaa usbuucyadii dhowaa la la xiriirinayey inuu ka tago Stamford Bridge, wakiiladiisa ayaana la wariyey inay la xiriireen kooxda Real Madrid.
Laakiin Conte ayaa u muuqda inuu sii haysanayo xiddigiisa tayada leh ee khadka dhexe Cesc Fabregas, waxaana uu ku ammaanay dadaalkiisa tababarka.
“Cesc waa ciyaaryahan Chelsea ah, waana ku faraxsanahay habdhaqankiisa iyo dareenkiisa,” ayuu yiri Conte.
“Waa inuu ogaadaa, marka aad koox wayn joogtid sida Chelsea oo kale ah, waa inaan qaataa go’aan ka hor kulanka, waa inaan doorto 11-ka aan ku soo galayo.
“Way dhici kartaa in Fabregas uusan ka mid ahayn kow iyo tobankaas, laakiin waxay kaloo ku dhici kartaa dhammaan ciyaartoyda.
“Waa muhiim inaad mar walba aragto dareenka saxda ah, maxaa yeelay waa inaan dagaallanaa xilli ciyaareedkan. Iminka waxaan qaatay go’aankan, laakiin ma garanayno kulanka xiga, inaan bedeli karo iyo inkale.
“Markii uu tababare go’aan qaato, waxaa mar walba jira sabab, laakiin waxaan door bidayaa inay aniga igu koobnaato. Balse waan ku celinayaa ma arko wax dhib ah, aad ayaan ugu faraxsanahay inaan haysto ciyaartoydaan, aanna tababar siiyo.”
Wax waliba oo aad uga baahan tahay kulanka caawa ay ciyaarayso Man City ee isreeb-reebka Champions League … (Imise saac ayaad daawan kartaa, Maxaadse ka garaneysaa kooxda ay la ciyaarayso?)
CONTE SHOW: Antonio Conte oo xalay kaligii wacdaro ka dhigay Stamford Bridge + Sawirro